Wednesday June 27, 2018 - 10:12:42 in Wararka by Super Admin
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xaqiijisay inuu caafimaad qabo Sheekh Abu Cubayda, kuna howlan yahay gudashada shaqadiisa ku aadan u Difaaca Diinta, Dalka iyo Dadka Somaaliyeed ee wajahaya duullaanada Saliibiyiinta.
Shabakada SomaliMeMo ayaa la xiriirtay mas'uul sare oo katirsan Xarakada Al-Shabaab waxna ka waydiisay hadallada maalmihii dambe ay faafinayeen qaar ka tirsan warbaahinta taageersan shisheeyaha kusoo duulay dalka, wuxuuna noo sheegay in warkaas aanu sal iyo raad lahayn islamarkaana looga danleeyahay in lagu marin habaabiyo Shacabka Soomaaliyeed.
"Warka kasoo yeeray kooxda Farmaajo ee ku aaddan in uu geeriyooday Sheekh Abu Cubayda ama uu xanuunsan yahay waa waxba kama jiraan, waxaa looga danleeyahay in lagu daboolo khiyaanadii ay dhowwaan ku kacday kooxda ridada ah ee uu Farmaajo hogaamiyo markii afar kamid ah dekedaha dadka Soomaaliyeed ay ku wareejisay dowladda cadowga ah ee Itoobiya Waxay doonayaan in ay bulshada Soomaaliyeed ka mashquuliyaan ka dhiidhinta khiyaanada ay galeen" sidaas waxaa yiri mas'uul ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay la xiriirtay shabakada SomaliMeMo.
"Sheekh Abu Cubayda wuu noolyahay, wuuna caafimaad qabaa, waqtigii uu Allaah u qoray ayuuna dhiman doonaa, inta ka horeysana wuxuu cadowga Allaah ka hortaagnaan doonaa inay ajandayaashooda gurracan ka hirgeliyaan dhulka Soomaaliyeed ee Muslimka ah" ayuu hadalkiisa sii raaciyay mas'uulkan katirsan Al Shabaab.
Isbuucyadii lasoo dhaafay ayaa mas'uuliyiin ka tirsan DF ee uu hogaamiyo Farmaajo waxay warbaahinta taageersan shisheeyaha u soo gudbinayeen macluumaad waxba kama jiraan ah oo ay ku sheegayeen in uu geeriyooday amiirka Xarkaada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheekh Abu Cubayda. Iyadoo hadalladaas kadibna ay soo baxayeen hishiisyo dhexmaray Dowladda Cadawga koowaad ku ah ummada Soomaaliyeed ee Itoobiya iyo Kooxda Farmaajo kuwaas oo qalinka loogu duugayey in Itoobiya lagu wareejiyo afar ka mid ah Dekadaha ku yaalla Soomaaliya.
R/Wasaaraha Itoobiya Abeey Axmad ayaa sidoo kale markii uu dib ugu laabtay wadankiisa warbaahinta ka sheegay in isaga iyo madaxdii Soomaalida ahaa ee uu kula soo kulmay Muqdisho ay si wanaagsan isku soo afgarteen, ayna rajaynayaan in dhawaan lamideeyn doono wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya.